E6013 ဂဟေဆော်အမှုန့်ပြုလုပ်ရန်သံအမှုန့် titania အမျိုးအစားအပေါ်ယံပါ ၀ င်သောကာဗွန်သံမဏိလျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အစေီဒီစီ။ အားလုံး-အနေအထားဂဟေဆော်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဂဟေဆော်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး spatter-free နီးပါးရှိသည်။ ၎င်းတွင်လွယ်ကူသောပြန်လည်လောင်ကျွမ်းမှု၊ ကောင်းမွန်သော slag ဖြုတ်နိုင်မှု၊ ချောမွေ့သောဂဟေဆော်ခြင်းအသွင်ရှိသည်။ သင်ရွေးချယ်ရန် Common Grade နှင့် Rutile Grade
1. လျင်မြန်သောသပိတ် & လွယ်ကူသော restrike & လွယ်ကူ slag- ဖယ်ရှားရေး
၂။ တည်ငြိမ်သော arc စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အနည်းငယ်မျှသော arc စွက်ဖက်မှု
၆။ အလွန်ကောင်းမွန်သော crack ခုခံမှုနှင့်ဓာတ်မှန်စွမ်းဆောင်ရည်
7. ထုပ်ပိုးခြင်း - 300kgs damproof အိတ်ထုပ်ပိုး; သို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်း
၁။ Electrode အားဂဟေဆော်ခြင်းမပြုမီ ၁ နာရီ ၃၅၀-၃၈၀ by ဖြင့်အတည်ပြုရမည်၊ ၎င်းကိုသုံးသောအခါလျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုခြောက်သွေ့စေပါ။
၃။ သင်တိုတောင်းသော arc ဂဟေဆော်ခြင်းကိုသုံးရမည်၊ လှိုင်းများသည်အလွန်ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်သင့်ပါ၊ ကျဉ်းသောပုတီးစေ့ဂဟေသည်သင့်လျော်သည်။
ဒြပ်စင် TiO2 AL2O3 SiO2 Mn CaO+MgO သဘာဝမြေသြဇာ အခြား
ရလဒ်အမှန် 42 ၄.၅ 289၁၀.၅42
E7018, E6011, E6010, E7024, စသည်တို့ကိုဂဟေဆော်သော electorde အမှုန့်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အတွက် Pls ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
welded အစိတ်အပိုင်းများ၏ပုံစံခွက် (assembly fixture) ကိုစုစည်းခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်းကျုံ့ခြင်းပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ၎င်းသည် welded အစိတ်အပိုင်းများ၏သည်းခံနိုင်မှုသည်ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များအတွင်းရှိသည်။
မတပ်ဆင်မီဂဟေဆော်ရာတွင်နှစ်ဘက်စလုံး၌ ၂၅ မီလီမီတာထက်မနည်းသောသံချေး၊ အဆီ၊ ဖုန်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပါ။ အနိမ့်အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိ၏အရေးကြီးသောဂဟေဆော်မှုများအတွက်အောက်ဆိုဒ်စကေးကိုဖယ်ရှားသင့်သည်။
စုဝေးနေစဉ်အတွင်းစုဝေးမှုကွာဟချက်ကိုထိန်းချုပ်သင့်သည်။ တင်းပါးဂဟေဆော်မှုကွာဟချက်သည် ၂ ~ ၃ မီလီမီတာနှင့်အသားလွှာဂဟေဆော်မှုကွာဟချက်မှာ ၀ ~ ၂ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းကွာဟချက်ကြီးလွန်းသောအခါ၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားသို့ဖြတ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ၎င်းကိုကွက်လပ်၌ဖြည့်စွက်ခြင်းကိုတင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပြီး၊ ခိုင်ခံ့သောတွဲချိတ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ကျန်ရှိသောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုလျှော့ချရန်တားမြစ်သည်။
ဂဟေဆော်ခြင်းမပြုမီ၎င်းသည် arc စက်နှိုးခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်းမရှိသောဧရိယာ၌လက်ရှိချိန်ညှိခြင်းကိုစမ်းသပ်ရန်တားမြစ်ထားသည်။ ဂဟေဆော်ပြီးနောက်ဂဟေဆော်မျက်နှာပြင်ကိုသန့်စင်ပြီးအခြောက်ခံသင့်သည်။
၀.၃ မှ ၄ မီလီမီတာအထူရှိသောသံမဏိပြားများအတွက်ဂဟေဆော်နည်းလမ်းများဖြစ်သောဂက်စ်သတ္တု arc ဂဟေဆော်ခြင်း (သို့) အာဂွန် tungsten arc ဂဟေဆော်ခြင်းကိုသုံးသည်။
မတူညီသောသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကိုဂဟေဆော်ရန်၊ တူညီသောခွန်အားအဆင့်ရှိဝါယာကြိုးများနှင့် flux များကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
အနိမ့်အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိကိုဂဟေဆော်သောအခါအလယ်၌ရပ်တန့်ရန်နှင့်ဂဟေဆော်ခြင်းကိုတစ်ကြိမ်ပြီးအောင်ကြိုးစားရန်မသင့်တော်ပါ။ အလွှာပေါင်းများစွာဂဟေဆော်နေစဉ်အလွှာများအကြားရှိအဆစ်များကိုယိမ်းယိုင်စေပြီးအလွှာများအကြားအပူချိန်ကို ၂၅၀ ~ ၃၀၀ ℃အတွင်းထိန်းချုပ်သင့်သည်။ ဂဟေဆက်ရိုး၏နောက်ထပ်အလွှာကိုဂဟေဆော်ခြင်းမပြုမီ၎င်းကိုသန့်ရှင်းသင့်သည်။ ချို့ယွင်းချက်မရှိကြောင်းသေချာစေရန်အပေါ်ဆုံးအလွှာ၏ဂဟေဆော်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
ယခင်: Surfacing Welding Rod D608 ဖြစ်သည်
နောက်တစ်ခု: နူးညံ့သောသံမဏိဂဟေဆော် Electrode AWS E6010
ဂဟေဆော် Flux အမှုန့်
ကြေးဝါအလွိုင်းဂဟေဝါယာကြိုး Silicon ကြေးဝါ Weldin ...
Valve and shaft Surfacing Welding Electrodes D507 သည်
မတူညီသောဂဟေတံများ, Cast Iron Welding Electrode ဖြစ်သည်, ဂဟေတံ, ၁.၅ မီလီမီတာဂဟေတံ, welding လျှပ်ကူးပစ္စည်း, Ss Welding Electrode ဖြစ်သည်,